Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fizahan-tany Indiana dia namporisika ny mpikambana: vaksiny!
Ny filohan'ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fizahan-tany (IATO), Andriamatoa Rajiv Mehra, dia nanao antso avo ho an'ireo mpikambana ao aminy sy ireo matihanina momba ny fizahantany mba hangataka ny tenany, ny mpiasa ary ny fianakaviana hisoratra anarana amin'ny COVID-19 hanaovana vaksiny.
Tokony hatao vaksiny koa ireo mpandraharaha mpizahatany vahiny satria hanantena ny hitohy tsy ho ela ny visa e-Tourist sy ny sidina iraisam-pirenena.
Amin'izao fotoana izao dia tsy ampy ny vaksininy, saingy mila manandrana isan'andro ao amin'ny tranonkala e-isan'andro ny olona iray mba hamandrihana toerana hanaovana ilay vaksiny.
Hafainganana ny famokarana vaksin ao amin'ny firenena amin'ny volana ho avy satria samy manangom-bokatra avokoa ny Pune's Serum Institute of India sy ny Hyderabad's Bharat Biotech.
Raha nangataka ny hanao vaksiny ny mpikambana sy ny hafa dia nilaza izy fa tena zava-dehibe ho an'ny tsirairay amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny ny fanaovana vaksiny ny tenany sy ny mpiasa amin'ny fotoana mety indrindra. Notohizany fa raha vantany vao vita ny vaksiny, ity hafatra ity dia tokony hampitaina amin'ny mpiara-miasa aminy sy ny mpandraharaha mpizahatany vahiny mba hiteraka fahatokisan-tena eo amin'izy ireo fa mandeha am-pilaminana ny programa fanaovana vaksiny any India. Izany dia hanehoana fa ny mpiasa rehetra sy ny laharam-pahamehana, ohatra, ny seranam-piaramanidina, ny mpamily, ny mpitari-dalana, ny mpanaraka, ny mpanao heloka bevava amin'ny fizahan-tany, ny biraon'ny hotely, ny fandraisana ary ny mpiasan'ny trano fisakafoanana, sns.
Nilaza koa Andriamatoa Mehra fa tokony hampitaina amin'ireo mpandraharaha mpizahatany vahiny izany raha vantany vao manomboka ny visa e-Tourist sy ny sidina iraisam-pirenena. India vonona handray ireo mpizahatany vahiny. Ankoatry ny famoronana fahatokisan-tena amin'ireo mpandraharaha fizahan-tany vahiny, dia hampirisika azy ireo ihany koa hanohy ny asa any India.